Fiber Laser Kucheka Machine - Goridhe Laser
Fiber Laser yekucheka muchina chinhu chinodhura, chiri nyore kushandisa, uye chishandiso chakasiyana chinoshandiswa kukanda-kumhanya kucheka kwesimbi mahwendefa nemapombi. Iyo inogona kukubatsira iwe kutanga nyowani yekutanga bhizimusi kana kuwedzera purofiti yekambani yako yakasimbiswa zvakanaka.
Yedu fiber laser yekucheka muchina yakakodzera yekucheka kabhoni simbi, simbi isina simbi, alloy simbi, chitubu simbi, aluminium, mhangura, ndarira, kwakakurudzira simbi, nezvimwewo, uye yave ichishandiswa zvakanyanya mukugadziriswa kwesimbi sheet sheet, simbi fenicha, moto mapaipi, mota, michina yekusimbisa muviri, michina yekurima neyemasango, michina yechikafu, kushambadza, makabati emagetsi, maelevhi nemamwe maindasitiri.
Muenzaniso Nha .: P1260A
Minimum Saizi Tube Fibre Laser Kutema Muchina
Minimum saizi pombi fiber laser yekucheka muchina P1260A, ine hunyanzvi auto feeder system pamwechete. Tarisa pane diki saizi chubhu yekucheka.
Muenzaniso Nha .: P120
Round Tube Fibha Laser Kutema Muchina
P120 ndeye yakasarudzika fiber laser yekucheka muchina wedenderedzwa chubhu (yakatenderera pombi). Iyo yakanyatsogadzirirwa kutsiva muchina wekucheka mune mota zvikamu zvikamu, pombi yakakodzera indasitiri, nezvimwe
Muenzaniso Nha .: P2060A / P3080A
Otomatiki Bundle Loader Fiber Laser Pipe Kutema Muchina
Yakakwira kuita chubhu laser yekucheka muchina ne otomatiki kurodha uye kudzikisa. Kucheka denderedzwa, rectangular, mativi uye mamwe machubhu profiles ekugutsa huwandu hwethubhu yekucheka zvido.
Muenzaniso Nha .: P2060 / P3080
Iyi semi otomatiki laser chubhu yekucheka muchina inoshongedzwa neyemanyorerwo loader uye izere yakakomberedzwa kuti ibudise mhando dzemhando yepamusoro mune akasiyana maumbirwo uye hukuru.
Muenzaniso Nha .: GF-1530T / GF-1540T / GF-1560T
Metal Sheet uye Tube Fibre Laser Kutema Muchina
Yakabatanidzwa dhizaini inopa maviri ekucheka mabasa esimbi sheet uye chubhu. Laser simba 1KW ~ 3KW, Kucheka nzvimbo 1.5 × 3m, 1.5 × 4m, 1.5 × 6m, Tube kureba 3m, 4m, 6m, Φ20-200mm
Muenzaniso Nha .: GF-1530JHT / GF-1560JHT / GF-2040JHT / GF-2060JHT
Yakazara Yakavharwa Pallet Changer Fiber Laser Pipe uye Sheet Metal Kucheka Muchina
Yakakwira-yekuita fiber laser yekucheka muchina ine yakazara yakavharika inodzivirira butiro, tafura yekutsinhana uye chubhu yekucheka chishandiso. Matare epombi nemapombi zvinogona kutemwa pamushini mumwe chete.
Muenzaniso Nha .: P2080
Tube Laser Kutema Muchina P2080
Kunyanya ye laser kucheka simbi chubhu yekutenderera, mativi, akaenzana, matete, oval, chiuno chubhu uye imwe yakaumbwa chubhu nepombi Iyo chubhu yekunze dhayamita inogona kunge iri 20-200mm, kureba 8m.
Muenzaniso Nha .: GF-2560JH / GF-2580JH
6000W 8000W Fiber Laser Kucheka Muchina
Yakakwira simba uye hombe fomati fiber laser cutter. BECKHOFF CNC mutungamiriri. 2.5m × 6m, 2.5m × 8m yekucheka nzvimbo. Kunonyanyisa kucheka ukobvu 30mm CS, 16mm SS
Muenzaniso Nha .: GF-1530JH
Yakazara Yakavharwa Fiber Laser Kucheka Muchina nePallet Changer
Fiber Laser kucheka muchina pamwe chinjana tafura. Yakavharwa dhizaini. IPG / nLIGHT 2000W fiber laser jenareta. Cheka max 8mm simbi isina simbi, 1 ...
Copyright © 2005-2020 Wuhan Golden Laser Co, Ltd. Kodzero dzose dzakachengetedzwa.